टन्सिल भएर पिडित हुनुहुन्छ ? नआतिनुहाेस ! अप्नाउनुहाेस यस्ताे घरेलु उपाए – Samacharpati
सप्तरीमा पोखरीमा डुबेर ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
नेकपा पूर्व सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीद्धारा स्वास्थ्य सामग्री वितरण
काठमान्डाैँ, १४ फागुन । जब टन्सिलाइटिस नामक ग्रन्थीमा संक्रमण हुन्छ, घाँटी भित्र घाउ भएको वा सुन्निएको अनुभव गर्छौं । यस्तो अवस्थामा खानपिन गर्न समस्या हुन्छ । खानपिन गर्न मात्र होइन, थुक निल्न पनि कठिन हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को कठिनाइ हो, टन्सिलाइटिस ग्रन्थीमार्फत हानिकारक ब्याक्टेरिया शरीरभित्र पुग्छ ।
टन्सिलको समस्या प्राय औधि चिसो वा गर्मी चिज खानाले हुन्छ । त्यसैले टन्सिल भएको छ भने चिसो कुरा खान बन्द गरौं । यस्ता फल र आहारबाट बच्नुस जुन पेटभित्र गएपछि चिसो हुन्छ । यसका अलावा अत्यधिक तेल, मसला र खुर्सानीवाला खानाबाट पनि टाढै रहनुपर्छ ।
दरबाङ बजार प्रवेश गर्ने मूल सडकमै स्थानीयवासीले लगाए भोटेताल्चा
पहिलोपटक भएकाले तीन पटकसम्म परीक्षण गर्दा धुलिखेल अस्पतालमा सबै ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’
कसरी चिन्ने मनोरोग ! जान्नुहाेस कस्ता हुन्छन त मनोरोगका सङ्केत
तरकारी बजारको घरटहरामा डोजर चलेपछि
नेकपा को सचिवालय बैठक बस्दै
दिपावलीका दिन चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका रानाको उपचारका क्रममा मृत्यु